Tsy fandriampahalemana Rotiky ny bala ny tarehin'ilay rasazy
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana any amin’ny distrikan’i Morombe. Rasazy na mpampivelona iray no nisy nitifitra teo amin’ny tarehiny ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 07 ora sy sasany hariva tao amin’ny hopitaly Ambahikily.
Vokatry ny hetraketraky ny dahalo no nahatonga izany, izay fantatra fa nahazo vahana tanteraka tokoa, taorian’ny nampangingina ny resana dinabe tany an-toerana. Ankoatra ity rasazy ity dia olona iray ihany koa herinandro lasa izay no notifirin’ny dahalo teo amin’ny tongony ankoatra ny halatr’omby izay efa tena mampiteny ny moana tokoa. Miantso ny Fitondram-panjakana mba hamerina ilay dinabe any amin’ity distrika iray ity araka izany ireo olom-boafidy any an-toerana ho fiarovana ny ain’ny mponina sy ny fananany.